Kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socda madaxweynayaashii hore Somaliya iyo Xildhibaano +SAWIRRO | HalQaran.com
Kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socda madaxweynayaashii hore Somaliya iyo Xildhibaano +SAWIRRO
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa hadda kulan xasaasi ah magaalada Muqdisho uga socdaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa kulankan looga hadlayaa Xayiraadii maanta lagu sameeyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed oo kusii jeeday magaalada Kismaayo.
Kulankaan ayaa yimid, kaddib markii uu soo dhammaaday kulan u socday Ergo ka socday dowladda oo raalin waday ay u tageen Shariif Sheekh Axmed.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif ayaa dowladda ka dalbaday in ay caddeyso sababtii maanta loogu diiday inuu u duulo Magaalada Kismaayo.
Ugu dambeyn, Warar lagu kalsoonyahay oo ay halayso mareegta Halqaran.com, ayaa sheegaya, in hadda uu kulan u socdo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Wasiirradii u tagay Madaxweyne Sheekh Shariif.
AKHRI + XOG: Puntland oo si kulul u cambaareysay xayiraadii M/weynihii hore ee Somaliya Sheekh Shariif
madaxweynayaashii hore Somaliya
Xayiraada garoonka diyaaradaha Kismaayo